जिवनशैली – korea pati
सिओल कोरियन लाहुरेलाई नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिः सुविधा सम्पन्न सहर बजारमा घरघडेरी, बैंक व्यालेन्स, विलासी जीवनशैली । अधिकांशको सवालमा यी र यस्ता आकलन मिल्ने हुन्छ । यस्तै भीडमा बागलुङ गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीका एक युवाले आफ्नो लाहुरे परिचयलाई बद्ल्ने अभ्यासमा लाग्नुभएको छ । पाँच वर्ष दक्षिण कोरियामा रोजगारी गरेर घर फर्कनुभएका दुदिलाभाटी गमबहादुर कँुवरको दैनिकी बाख्रा […]
September 2, 2020 Korea patiLeaveaComment on प्राकृतिक विधिबाट कसरी निरोगी हुने ?
अपवाद वाहेक हामी स्वस्थ शरीर लिएर जन्मन्छौं । जन्मदा हाम्रो शरीर एवं शरीरका अंगहरुले सही कार्यसंचालन गरिरहेको हुन्छ । सबै कुरा सन्तुलित र सही हुन्छ । तर, जब–जब हुर्कदै जान्छौं, हाम्रो स्वास्थ्य उस्तै रहँदैन । पेट खराब हुन थाल्छ । कलेजो, मुटु, फोक्सोको कार्य क्षमता घट्न थाल्छ । उमेर ढल्कदै गएपछि स्वभाविक रुपमा शरीरका अंगहरु […]
August 19, 2020 Korea patiLeaveaComment on संवैधानिक पदबाटै थरको नामाकरण !
काठमाडौं धनकुटा घर भएका कुलबहादुर गुरुङले धादिङकी बिन्दा गुरुङसँग विवाह गरे । उनी सुविधा र अन्य कारणले धादिङमा नै घर बनाएर बस्न थाले । रहँदाबस्दा उनको नाम नै ‘धनकुटा’ रहन गयो । उनको वास्तविक नाम धेरैले बिर्सिँदै गए । कुनै समयमा प्रहरीको हवल्दार बनेका व्यक्तिको तीन पुस्तासम्मलाई ‘हवल्दारको सन्तान’ को रूपमा चिनाउने गरिन्थ्यो । यो […]
काठमान्डौँ गाउँघरमा धान सुकाउन प्रयोग हुने मान्द्रोको प्रयोग अहिले हुन छाडेको छ । तर सोही मान्द्रोलाई नयाँ हिसाबले प्रयोग नट क्राफ्टले एउटा बस्ने मुडा र चिया टेबुल जस्ता संरचना तयार पारेको छ । त्यस्तै, ढकियाको चलन हराउँदै गयो भनेर सोही कच्चा सामग्रीबाट नयाँ सिपको विकास गरी घर सजाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण नट क्राफ्टले दिएको छ […]
August 12, 2020 Korea patiLeaveaComment on दृढता र इच्छाशक्तिबाट रोगसँग लड्न सकिन्छ
स्वास्थ्य जिवनशैली मनुष्य आफ्नो विचारद्वारा बनेको हुन्छ । ‘यो पुरुष श्रद्धामय छ जो जस्तो श्रद्धा गर्छ त्यो त्यस्तै हुन्छ’ भनी उपनिषद्मा भनिएको छ । मनुष्य विचार विशेषको मुद्गल हो । यसकारण आरोग्यताको दृढ भावना र मन्त्र जप एवं ध्यानद्वारा पनि रोग निवृत्ति हुन्छ । यस विषययमा यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरौं । प्रत्येक मनुष्यामा एक ईश्वर […]
जिवनशैली ‘तिमीहरुमध्ये को सबैभन्दा राम्रो डाक्टर बन्न चाहन्छौं ?’ चिकित्साशास्त्रका अधिकांश विद्यार्थी गर्वसाथ हात उठाउँछन् ।प्रोफेसरले एक विद्यार्थीलाई इंगित गर्दै सोध्छन्, ‘तिमीलाई लाग्छ, के तिमी राम्रो डाक्टर बन्नेछौं ?’युवती उठ्दै फुर्तिसाथ भन्छिन्, ‘यस सर ।’ ‘किन तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ कि तिमी असल डाक्टर बन्नेछौं।चिकित्साशास्त्र पढिरहेकी युवती भन्छिन्, ‘किनभने मलाई बिरामीहरुप्रति लगाव छ । म उनीहरुको […]
स्वास्थ्य पेटमा ग्यास भरिने, कब्जियत हुने, पखला लाग्ने जस्ता समस्यालाई हामी सामान्य ठान्छौं । कतिपय अवस्थामा यी सामान्य पनि हुन् । खानपान र दिनचर्या नमिल्दा यस्ता समस्या उत्पनन हुनसक्छ । तर, सधै यहि अवस्था रहिरहेमा ? यो अवस्था निरन्तर रहेमा सर्तक हुनैपर्छ । किनभने यसले के संकेत गर्छ भने, ठूलो आन्द्रामा कुनै न कुनै समस्या […]
स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी सचेत र सर्तक हुनुपर्छ, गर्भावस्थामा । यो आफैँमा एक संवेदनशील समय हो । यतिबेला गर्भवतीमा शारीरिक परिवर्तनहरू देखापर्छ, साथसाथै भावनात्मक पनि । त्यसैले गर्भवतीले सकेसम्म आफूलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा सन्तुलित राख्नुपर्छ। गर्भावस्थामा उचित खानपान र सन्तुलित जीवनशैली मात्र होइन सोच चिन्तन पनि सकारात्मक हुन जरुरी छ । गर्भवतीको मानसिक […]
जिवनशैली ‘लकडाउनको बेला गाडी नचढ्दा पनि सांसदहरूले गाडी भाडाबापतको भत्ता लिए ।’ ‘खाडीका मजदुरको पसिनामा मन्त्रीलाई विदेश भ्रमण र दूतावासलाई गाडी ।’‘खरिपाटी क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूले औषधि खाएकै थिएनन् । तर औषधि खर्च भन्दै सेनाले सरकारबाट ७३ लाख बढी भुक्तानी लिएको छ ।’ ‘लकडाउनपछि राजस्व नउठेर खर्च धान्न मुस्किल भयो भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृहनगरमा भ्युटावर बनाउनका […]
June 18, 2020 Korea patiLeaveaComment on पशुपंक्षी झै के हामी वर्तमानमा रमाउन सक्छौं ?
जिवनशैली एउटा चराले बिहानभर उड्दा–उड्दा एउटा रुखमा फल भेट्छ । त्यही फलले आफ्नो भोक मेट्छ । रुखमा लटरम्म फलहरु छन् । तर, आफ्नो सानो पेट भरिएपछि चरालाई पुग्छ । चरा भुर्र उडेर अन्तै जान्छ । तर, त्यही ठाउँमा मान्छे भइदिएको भए ?भोकको झोंकमा मान्छेले आफुलाई चाहिनेभन्दा बढी खानेकुरा खाइदिन्थे । भरपेट खाएपछि पनि मान्छेको मन […]